I-China umphezulu oPhezulu ongafakwanga uqhagamshelo Ubushushu bokuchonga ubuchwephesha be-STPSMD38 abavelisi kunye nabathengisi Ilanga
Umphezulu Onyuswe ukungafowunelwa kobushushu kwi-Infrared Sensor STPSMD38
Umgangatho onyusiweyo (SMD) wohlobo lokulinganisa ubushushu obungenakunxibelelana STPSM38 luhlobo olutsha lwe-CMOS ye-thermopile IR sensor, ebonisa ubuntununtunu obuhle, ukuzala okuphezulu kunye nokuthembeka. Inzwa iyakonwabela ukubumbana kunye nobukhulu kwaye kulula ukudibanisa ngenxa yephakheji yayo yeceramic. Inzwa ye-SMD38 isetyenziswa ngokubanzi ekusetyenzisweni komlinganiso wobushushu obuchanekileyo, izixhobo ezinokuthwala ezinokuthenjwa kunye nokunxibelelana komatshini wabantu.
I-SMD38 sisixhobo esibonisa ubushushu esingadibaniyo nesifektri esilinganiswe ngokuchanekileyo. Ngaphakathi, kuthathwa amanyathelo okhuseleko ombane kunye nobushushu ukuhlawulela iimeko zangaphandle ezibashushu ngokwasemphefumlweni. Isiginali yombane wevoltage element iyandiswa. Amandla amakhulu eSMD38 kukuba lo mahluko wobushushu ujikeleze iphakheji yoluvo uya kuncitshiswa ubuncinci. Nangona kunjalo, ezinye iimeko ezigwenxa ziya kuchaphazela inzwa. Ukuchaneka kwethemometha kunokuchaphazeleka ngokwahluka kobushushu kwiphakeji ebangelwa zizinto ezinje (phakathi kwabanye): i-elektroniki eshushu ngasemva kwenzwa, izifudumezi / izinto ezipholileyo ngasemva okanye ecaleni kwoluvo okanye ngento eshushu / ebandayo kufutshane kakhulu nesenzi ayifudumezi nje kuphela into ebonakalayo kwi-thermometer kodwa nakwiphakheji ye-thermometer.
Isetyenziswa ngokubanzi: Ukuchaneka okuphezulu kwemilinganiselo yeqondo lobushushu elingadibaniyo, imilinganiselo yeqondo lobushushu lomzimba, ithemometha engaqhagamsheleki yesicelo se-mobile kunye ne-IoT, indawo yokujonga ubushushu kwindawo yokuhlala, eyorhwebo kunye neyokwakha imeko yomoya, ulawulo lobushushu kwimizi-mveliso, izixhobo zasekhaya kunye ulawulo lobushushu kunye nokhathalelo lwempilo, ukujonga imfuyo.
Umphezulu wentaba yendlu yodongwe
Isalathiso sobushushu beThermistor sibandakanyiwe
Iinjongo zethemometri ngokubanzi
Egqithileyo Ubushushu obungenaXabiso bokulinganisa i-Thermometer nge-IR Sensor STP11DF89
Okulandelayo: Ubushushu kwidijithali Ukulinganisa inzwa engabonakaliyo ye-infrared STP9CDITY-300
Ubushushu bomzimba ekufumanekeni okungafunekiyo ...
Ubushushu obungafumanekiyo Ubushushu Thermopile IR ...
Ubushushu beDijithali yoMzimba Ukulinganisa ukungadibani ...
Ithemometha ye-infrared yeTemperatur engenakunxibelelana ...
Umphezulu Onyuswe IR woluvo for Bodyless Iinkcukacha ...
Industrial Non-uqhagamshelwano Pyrometry thermopile Inf ...